မိန်းကလေး တွေ ဒီ ရက်ပိုင်း အထူး သတိထား ကြပါ (အများ သိအောင် ရှယ်ထားပေးပါအုံး ….) – GaMone Media
Homepage / Knowledge / မိန်းကလေး တွေ ဒီ ရက်ပိုင်း အထူး သတိထား ကြပါ (အများ သိအောင် ရှယ်ထားပေးပါအုံး ….)
မိန်းကလေး တွေ ဒီ ရက်ပိုင်း အထူး သတိထား ကြပါ (အများ သိအောင် ရှယ်ထားပေးပါအုံး ….)
မိန်းကလေးတွေ သတိထားကြပါ။ ဒီထဲက ဖုန်းက အိမ်ကအဖေ ဖုန်းကိုခေါ်ပြီး နင်တယောက်တည်းလား နင်ရေချိုးနေတဲ့ video ကို ရိုက်ထားတယ် နင်ငါချိန်းတဲ့ နေရာကို လာမှာလား ဆိုပြီး စိတ္တဇအသံကြီးနဲ့ ဖုန်းခေါ်တာအဖေက ယီးမို့ ငါလာပြောနေတာလား ဆိုပြီး ဆဲလွှတ်လိုက်တာ ပီးတော့ ဘာတွေ ရှုပ်ထားတာလဲဆိုပီး ငယ်တို့ကို ဆူတော့ငယ်တို့ ပြန်ဆက်ကြည့်တော့လဲ အဲ့တိုင်း ကြောက်စရာအသံကြီးနဲ့ နင့်ဘေး မှာဘယ်သူရှိလဲ တယောက်တည်းလား စကားအေးဆေးပြော လို့ရလား
နင်ရေချိုးနေတဲ့ video ငါ့မှာ ရှိတယ် ငါချိန်းတဲ့နေရာကို လာမှာလား ပိုက်ဆံပေးမှာလားဆိုပြီး အသံကိုကြောက်စရာ ကောင်းအောင် ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောတာ အဲ့ဒါနဲ့ အေး ရှိရင် ပို့လိုက် ငါကိုယ်တိုင် ပြန်တင်ပေးမယ်လို့ ပြောတော့ ငါချိန်းတဲ့ နေရာကို လာပါဆိုပီး ထပ်ပြောတယ် မွှန်နေအောင်ဆဲတော့ဖုန်းချသွားတယ်ရူးနေတာလား မသိဘူးး အဖေကတော့ ဒေါသတွေထွက်ပီး ငယ်တို့ကို ဆူရော နှမဘေး လုပ်တာသတိထားကြပါ ဒီကာလမှာ ပိုက်ဆံညှစ်တဲ့ကောင်တွေ ထောင်ခါထားလို့ ငွေရှာစားနေတဲ့ မဒိန်း ကောင်တွေရော အဆိုးပေါင်းစုံပဲ သွားတာလာတာ ဂရုစိုက်ကြပါငါတို့ညီအမ ကတော့ နှစ်ည အိပ်သုံး ရက်လောက် ဆူခံနေရပီ
မိန္းကေလးေတြ သတိထားၾကပါ။ ဒီထဲက ဖုန္းက အိမ္ကအေဖ ဖုန္းကိုေခၚၿပီး နင္တေယာက္တည္းလား နင္ေရခ်ိဳးေနတဲ့ video ကို ႐ိုက္ထားတယ္ နင္ငါခ်ိန္းတဲ့ ေနရာကို လာမွာလား ဆိုၿပီး စိတၱဇအသံႀကီးနဲ႔ ဖုန္းေခၚတာအေဖက ယီးမို႔ ငါလာေျပာေနတာလား ဆိုၿပီး ဆဲလႊတ္လိုက္တာ ပီးေတာ့ ဘာေတြ ရႈပ္ထားတာလဲဆိုပီး ငယ္တို႔ကို ဆူေတာ့ငယ္တို႔ ျပန္ဆက္ၾကည့္ေတာ့လဲ အဲ့တိုင္း ေၾကာက္စရာအသံႀကီးနဲ႔ နင့္ေဘး မွာဘယ္သူရွိလဲ တေယာက္တည္းလား စကားေအးေဆးေျပာ လို႔ရလား
နင္ေရခ်ိဳးေနတဲ့ video ငါ့မွာ ရွိတယ္ ငါခ်ိန္းတဲ့ေနရာကို လာမွာလား ပိုက္ဆံေပးမွာလားဆိုၿပီး အသံကိုေၾကာက္စရာ ေကာင္းေအာင္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းေျပာတာ အဲ့ဒါနဲ႔ ေအး ရွိရင္ ပို႔လိုက္ ငါကိုယ္တိုင္ ျပန္တင္ေပးမယ္လို႔ ေျပာေတာ့ ငါခ်ိန္းတဲ့ ေနရာကို လာပါဆိုပီး ထပ္ေျပာတယ္ မႊန္ေနေအာင္ဆဲေတာ့ဖုန္းခ်သြားတယ္႐ူးေနတာလား မသိဘူးး အေဖကေတာ့ ေဒါသေတြထြက္ပီး ငယ္တို႔ကို ဆူေရာ ႏွမေဘး လုပ္တာသတိထားၾကပါ ဒီကာလမွာ ပိုက္ဆံညႇစ္တဲ့ေကာင္ေတြ ေထာင္ခါထားလို႔ ေငြရွာစားေနတဲ့ မဒိန္း ေကာင္ေတြေရာ အဆိုးေပါင္းစုံပဲ သြားတာလာတာ ဂ႐ုစိုက္ၾကပါငါတို႔ညီအမ ကေတာ့ ႏွစ္ည အိပ္သုံး ရက္ေလာက္ ဆူခံေနရပီ
Previous post (၇)ရက် သား သမီး ပြည်သူ တွေ အတွက် တတ်နိုင်သ လောက် လှူဒါန်း မှုတွေ ပြု လုပ်နေ တဲ့ အဆိုတော်မနော
Next post အလှူငွေ တွေ ကို မတရား လိမ်စား သူတွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လိပ်ပြာ လုံစေ ဖို့ ပြောလိုက်တဲ့ “အိန်ဂျယ်လမုန်”